January 15, 2018 Internet Khabar
विश्वमा अहिले यस्ता मानिसहरु निकै कम होलान् जसले स्मार्टफोन प्रयोग गर्दैनन् । अपवादबाहेक स्मार्टफोन आज विश्वका अधिकांश मानिसहरुका लागि आधारभूत आवश्यकता जस्तै बनेको छ । प्रविधिको विकास सँगसँगै मोबाइल फोन अब फोन मात्र रहेन, स्मार्टफोन बनेको छ।
४. ओप्पोः स्मार्टफोन बिक्रीको मामिलामा चौथो नम्बरमा छ, चिनियाँ स्मार्टफोन ओप्पो । गत वर्ष कम्पनीले विश्व बजारमा २ करोड ७८ लाख स्मार्टफोन बेचेको छ। विश्व बजारमा यसको हिस्सा ८ दशमलब १ प्रतिशत रहेको छ । यो कम्पनीले आफ्नो बजार तीव्र गतिमा विस्तार गरिरहेको छ ।
५. शाओमीः चिनिया कम्पनी शाओमी स्मार्टफोन बिक्रिको हिसाबले पाचौ स्थानमा रहेको छ । गत वर्ष यसले विश्व बजारमा २ करोड १२ लाख गोटा स्मार्टफोन बेचेको छ । यसको बजार हिस्सा ६.२ प्रतिशत रहेको छ । शाओमीले स्मार्टफोनका अलावा ल्यापटप तथा अन्य उपभोक्रा इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरुको पनि उत्पादन गर्दछ। एजेन्सीको सहयोगमा
जाडोमा कसरी देखिने ग्ल्यामरस ?
राम रहीमको बैंक खातामा १ अर्ब १९ करोड, हनीप्रीतसँग कति ?
अस्पतालको चरम लापरवाही, अप्रेशन रुममा काटिएको घाईतेको खुट्टा कुकुरले लिएर कुद्यो